Miidiyaaleen odeeffannoo madaalawaa dhiyeessuurratti otoo xiyyeeffatanii
Karoora Guddinafi Tiraansfoormeeshinii 2fa biyya keenyaa dhugoomsuu keessatti gaheen miidiyaa olaanaadha. Miidiyaan sochii siyaasaa, hawaasummaafi dinagdee biyya tokkoo hawaasa biraan gahuufi hirmaanaa ummataa finiinsuu keessatti qooda cimaa qaba.
Miidiyaan akkuma guddina biyyaa tumsu sirnaan hojiirra ooluu baannaan miidhaan dhaqqabsiisus salphaa miti. Kunis odeeffannoon karaa miidiyaa darbu madaalawaa kan hintaaneefi haqa qabeessummaansaa gad bu’aa taanaan ilaalcha dogoggoraa ummata keessatti dagaagsa. Ummatni ilaalcha dogoggoraan faalame ammoo ijaarsa sirna dimokraasiifi misoomarratti aantummaafi abbummaan hirmaachuu hindanda’u.
Akkuma beekamu Itoophiyaa keessatti gaazeexessummaa misoomawaa ‘Developmental Journalism’ hojiirra oolaa jira. Diinni guddaan biyya keenyaa hiyyummaa ta’uun amanameeti miidiyaas toora misoomawaarra hiriirsuuf kan yaadame. Ta’us miidiyaaleen biyyattii gaheesaanii sirnaan ba’ataa akka hinjirre mootummaan ifatti dubbataa tureera.
Haaromsa gad fagoon sadarkaalee gara garaatti adeemsifamaa turanirraa hubatames kana. Wantoota dadhabbii miidiyaaf sababa ta’an keessaa tokko humna namaa ga’umsaafi qulqullina qabu baay’inaan horachuu dhabuudha.
Ministirri Muummee Hayilamaariyaam Dassalanyi tibbana kominikeetarootaafi miidiyaalee biyyattii waliin wayita marii taasisan akka dubbatanitti, bara saayiinsiifi teknolojiin sadarkaa olaanaarra ga’etti rakkoo ga’umsaa kaasuun rakkisaadha.
Kunis jijjiiramaaf fedhii dhabuu yoo ta’e malee namootni miidiyaalee hawaasaarratti yaada qalbii hawaasaa daran hawatu barreessan hundi leenjii gaazexeessummaa fudhatanii osoo hintaane shaakalaafi dubbisuurraa kan horataniidha.
Qabeenyarra taayitaaf bakka kennuun hariiroo gaarii hawaasaafi mootummaa jiddduu jiru hangam akka miidhee ture hubachuun danda’ameera. Anis leenjii gabaabduu tibbana ogeessota miidiyaatiif Magaalaa Hawaasaatti kennamerraa kanan hubadhe kanuma.
Gaazexeessaa kan tureefi ogeessota dhaabbilee mitmootummaarraa leenjicharratti hirmaatan keessaa tokko kan ta'e Isheetuu Galatuu akka jedhetti, maddi odeeffannoo dhugaa, madaalawaafi wayitaawaa ta’uu qaba. Nama dhuunfaarra gaaffiifi fedhii hawaasa bal’aa bakka bu’utti cichuun barbaachisaadha.
Namni dhuunfaan bakka gad dhiisuu yookiin du’uu danda’a. Dhimmiifi gaaffiin hawaasaa garuu darbee jiraata. Ogummaa guddaan miidayaa keessatti hordofamuu qabu bu’aafi miidhaa qabiyyee dhimma dhiyaatu dursanii hubachuudha; Miidiyaan goolii kaasuufis ta’e dhaamsuuf humna guddaa waan qabuuf.
Akka yaadasaatti ilaalcha gara tokkotti luucca’e qabatanii jijjiirama eeguun gowwummaadha. Odeeffannoo madaalawaan ejennoo ofiirra turuuf nama gargaara. Odeeffannoo madaalawaan sababaan deggarame hawaasa keessa turuun miidiyaafis ta’e guddina biyyaatiif daran murteessaadha.
“BBC” dabalatee miidiyaalee adda addaarraa hojjetaa kan tureef ammaan tana dhaabbata mitimootummaa keessa hojjetaa kan jiru Naaziif Jamaalis guddinni yaadame caalaatti kan dhugoomu yoo miidiyaan sirnaan ga’eessaa taphate qofa ta'uu dubbata. Hundaa ol miidiyaan aantummaa ummataa gonfachuu qaba. Miidiyaan odeeffannoo sirrii qabatee ummataafi mootummaa gidduu riqicha amanamaa ta’ee tajaajiluu qaba.
Yeroo ammaa garuu wanti miidiyaa tokko tokkorraa hubatamu faallaa kanaa ta’ee mul’ataa akka jirus eeree, waan madaalawaa dhiyeessuurra fiixee tokko qabatanii faarsuu yookiin hafarsuutu heddummaata jedha. Garuu lameenuu sababaan madaalliisaanii eegsisanii walduukaa tarkaanfachiisuun akka danda'amus ni ibsa.
Walumaagalatti, miidiyaan madaallii odooffannoosaa eegee dhiyaatu guddina biyyaa tumsuu keessatti shoora guddaa qaba. Misoomaafi dimokraasii eegalame itti fufsiisuuf miidiyaaleen mootummaafi hawaasa gidduutti riqicha dhugaa ta’anii tajaajiluun irraa eegama.
Torban kana/This_Week 33693
Guyyaa mara/All_Days 1625488